Mampatavy ny mihinan-kanina maraina foana
Rehefa manao régime izay mametra ny karazan-tsakafo hanintsika isika dia lasa manatsinjara ny sakafo hanintsika ho sokajy 2 :
ireo izay « tsara », « mahasalama », « mampahia », « mampihena » : paoma, tantely, kaokaombra, papaye, … ohatra ;
ireo izay « ratsy », « tsy ara-pahasalamana » na « mampatavy » : paty, vary, mofo, sokola, akondro, zavoka, dobera, … ohatra.
Eto, ny lalàna dia miteny fa ny sakafo « mampahia » na « mampihena » dia afaka hanina be dia be satria manampy anao hihena na hahia. Ary ny sakafo « mampatavy » dia tsy azo hanina tanteraka satria mampatavy na firy na firy ny fatrany haninao.
Mifoha ohatra ianao. Mihinan-kanina ianao nefa tsy noana akory. Nefa, tsaroanao fa tsy mahazo tsy misakafo maraina fa « mampatavy izany ». Manery tena ary ianao hihinana paoma iray sy dite miaraka amin’ny tantely. Lazaina fa « mampahia » na « mampihena » ny paoma sy ny tantely. Ary satria ianao nihinana nefa tsy noana akory, dia tsy nila an’iny hery iny akory izany ny vatana. Nanome hery tsy nilaina an’ny vatana izany ianao. Ary na dia avy amin’ny « sokajy tsara » aza ireny sakafo ireny dia ho tahirizin’ny vatana amin’ny endrika tavy.
Ohatra ihany koa hoe tsy nisakafo maraina ianao satria mizihitra be ny kibonao. Mety hoe nihinan-kanina be loatra ianao tamin’ny alina. Izany hoe, tsy nisakafo maraina ianao, nefa voalaza izany fa mampatavy. Mahatsapa ianao fa toa ny banga ny ao anatin’ny vavoninao amin’ny 10 ora. Noana amin’izay izany ianao. Tsy mahita paoma na sakafo « tsara » ianao manodidina anao. Mividy mofo ary ianao satria izay no hitanaoa any amin’ny épicerie. Satria nihinana mofo ianao tamin’ny hanohanana, izany hoe nila hery ny vatana, dia nahafapo ny filan »ny vatanao izany ianao tamin’iny mofo iny. Ary tsy hatavy ianao amin’ny fihinanana iny mofo iny raha tsy miohatra ny hanohananao. Na dia ao anatin’ny « sokajin-tsajkafo ratsy » aza ny mofo.
Noho izany, tsy misy sakafo « ratsy » na « tsara », na « mampihena » na « mampahia » na « mampatavy » izany.
Ny sakafo rehetra, na inona io na inona, izay hanina rehefa tsy noana akory dia mampatavy.
Ny sakafo rehetra, na inona io na inona, izay hanina rehefa noana, dia sady tsy mampatavy no tsy mampahia.
Ny saakfo rehetra, na inona io na inona, izay hanina rehefa noana nefa tsy mahafapo tsara ny hanohanana, izany hoe mbola noana ianao avy eo, dia mampihena.
Tsotra sady lojika.
Aza lanaiky ho fitahina toa ny fianakavian’i Feno tao amin’ny boky : « Mitarainanytany » izay nosoratan’i Andry Andraina, izay noterena hanao régime mba « hanasitrananana » ny anabaviny izay voan’ny pesta. Sady maty zanaka vavy ny ray aman-dreniny no very vola noho ny finoana dadarabe.